एजेन्सी, ७ वैशाख पूर्व पोनस्टार एवम् बलिउडकी अभिनेत्री सन्नी लियोनीको छुट्टै पहिचान बनिसकेको छ । सन्नी अहिले भारतमा जमेकी पनि छिन् । बलिउडमा उनलाई विशेषगरि आइटम नृत्यमा बढी अवसर मिल्ने गरेको छ । तर, नायिका सन्नी लियोनी यो कुराले मात्र खुशी छैनन् । उनी आफ्नो जिन्दगीको एउटा यस्तो कुरा हटाउन चाहन्छिन् जुन कुराले उनलाई लामो समयदेखि पोलिरहेको छ । सन्नीले भारतीय..
‘कटप्पा’को जोडी बन्दै ऐश्वर्या, फिल्ममा अमिताभ बच्चनको पनि भूमिका
एजेन्सी, ६ बैशाख । ब्लकबस्टर फिल्म ‘बाहुबली’मा कट्प्पाको भूमिका गरेर चर्चा बटुलेका अभिनेता सत्यराजले मणिरत्नमको निर्देशनमा बन्ने एक सिनेमामा पूर्वविश्वसुन्दरी एवम् अभिनेत्री ऐश्वर्या रायको जोडी बन्ने भएका छन् । ‘पोन्निनी सेल्वम’ नामक सिनेमामा दुबैले एकअर्कासँग रोमान्स गर्नेछन् । सिनेमामा दुबै पतिपत्नीको भूमिकामा हुनेछन् । सिनेमामा अमिताभ बच्चनले पनि काम गर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ । मणिरत्नमले बनाउन लागेको यस सिनेमा एक चर्चित तमिल..
सञ्जय दत्तकी छोरी त्रिशालाको फोटो इन्टरनेटमा भयो भाइरल !
मुम्बई, ६ बैशाख । फिल्मी क्षेत्रबाट टाढै रहेतापनि बलिउड अभिनेता सञ्जय दत्तकी छोरी त्रिशालाको नाम चर्चित स्टारडटर्शमा सधैं समावेश हुनेगर्छ । हालै मात्र इन्स्टाग्राममार्फत आफ्नो नयाँ लुक्स र गेटअप सहितको फोटो साझा गरेकी २९ वर्षीया त्रिशालाको फोटोको अहिले चर्चा चुलिएको हो । रेड टप र ब्ल्याक प्लाजोमा सजिदै कालो ब्यागमा प्रकट भएकी त्रिशालाले यसपटक आफूलाई बिल्कुलै नयाँ अन्दाजमा प्रस्तुत गरेकी हुन् । त्रिशाला..
विराट कोहलीका कारण बलिउड छाड्दै अनुष्का शर्मा !
मुम्बई, ५ वैशाख बलिउड नायिका अनुष्का शर्मा पछिल्लो समय फिल्म ‘जीरो’ मा शाहरुख खानसँग देखिएकी थिइन् । त्यसपछि अनुष्काले कुनै पनि फिल्म साइन गरेकी छैनन् । अहिले चर्चा चल्न थालेको छ कि, अनुष्काले अब फिल्ममा अभिनय गर्ने रुचि देखाउन छोडेकी छिन् । यतिबेला उनका हातमा कुनै पनि फिल्म छैनन् । जबकि, उनी बलिउडकी टप हिरोइनमध्ये एक हुन् । फिल्म त एकातिर भयो,..
लोकप्रिय चिनियाँ एप ‘टीक-टक’ लाई भारतमा गुगलद्वारा ‘ब्लक’
एजेन्सी, ४ बैशाख भारतको सर्वोच्च अदालतले टिकटकबारे २२ अप्रिलमा सुनुवाइ गर्ने बताएको केही घन्टापछि गुगलले लोकप्रिय चिनियाँ एपलाई प्रतिबन्ध लगाएको हो । मद्रा उच्च अदालतमा यो विषयमा सुनुवाइ जारी छ । सोही कारण देखाउँदै भारतीय सर्वोच्च अदालतले यो विषयमा पछि निर्णय गर्ने जनाएको थियो । टिकटकले युवाको भविष्य तथा बच्चाको दिमाग बिगारिरहेको न्यायाधीशहरूको व्याख्या थियो । राज्य तह अदालतले माग गरे बमोजिम अन्तरिम आदेश..
भारतमा सलमानको वयस्क ‘लूक्स’ देखेर पेरिस हिल्टन भइन् ‘फिदा’
मुम्बई, ०४ बैशाख । बलिउडका सुपरस्टार सलमान खान अहिले उनको आगामी फिल्म भारत लाई लिएर निकै चर्चामा छन् । प्रमोशन सुरु भैसकेको भारतको पहिलो ट्रेलर आगामी साता रिलिज हुँदैछ । सिनेमामा सलमानले सर्कस कलाकारको भूमिका निभाएका छन् । भारतमा सलमानका साथमा तब्बु, दिशा पटानी, जैकी श्राफ, सुनिल ग्रोवर लगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् । त्यसअघि यस सिनेमासँग सम्बन्धित सलमान खानका बिभिन्न तस्वीरहरु मिडियामार्फत..
बलिउड अभिनेत्री एमी ज्याक्शन ब्वाईफ्रेण्डसँग यस्तो अवस्थामा भेटिएपछि ...
ऐजेन्सी, ३ वैशाख पछिल्लो समय बलिउड अभिनेत्री एमी ज्याक्शन दुबईमा आफ्नो ब्वाईफ्रेण्ड जर्ज पानायिटुसँग समय बिताइरहेकी छन् । अभिनेत्री एमीले सोसल मिडियामा त्यहाँका तस्वीरहरु सेयर गरिरहेकी छन् । तस्वीरमा अभिनेत्री एमी बैबी बंप लुक्समा देखिएकी छन् । ती तस्वीरहरु सोसल मिडियामा भाइरल बनिरहेको छ । एमीले इन्स्टाग्राममा आफ्नो ब्वाइफ्रेण्डसँगको तस्वीर सेयर गरेकी छन्, जहाँ उनी बेबी बंप नजरमा देखिएकी छन् । यसका..
जब दिशा पटानीले प्रियंका चोपडालाई पनि पछि पारिन्
मुम्बई, २ वैशाख हट अभिनेत्री दिशा पटानी पछिल्लो समय युवा पुस्ताबीच निकै लोकप्रिय छिन्। चाँडै उनी सलमान खानसँग नयाँ फिल्म ‘भारत’ मा देखिँदै छिन्। उनी विस्तारै फिल्ममा आफ्नो ठाउँ बनाउँदै छिन् भने ब्रेड एण्डोर्समेन्ट्समार्फत पनि उनी नाम कमाइ रहेकी छन्। कुनै बलिउड अभिनेत्रीको ब्राण्ड भ्यालु घटिरहेको छ भने ती हुन् प्रियंका चोपडा जोसन। प्रियंकालाई नयाँ ब्राण्ड पाउन मुस्किल हुन थालेको छ भने..
मुम्बई, ३० चैत बलिउड अभिनेता सलमान खानको फिल्म ‘दबंग–३’ फेरि संकटमा परेको छ । भारतीय पूरातत्व सर्वेक्षण विभाग एएसआईले सुटिङ नगर्न आदेश दिएपछि उनको फिल्म संकटमा परेको हो ।फिल्म ‘दबंग–३’को लागि मध्येप्रदेशको मान्डुस्थित ऐतिहासिक जल महलमा बनाइएको सेट हटाउन एएसआईले सूचना जारी गरेको छ । एएसआईले सेट नहटाएमा फिल्म सुटिङ हुन नदिने धम्की दिएको छ । समाचारको अनुसार प्रोडक्शन हाउसलाई यस विषयमा..
काठमाडौँ, २५ चैत मिस नेपाल २०१९ का लागि लिइएको अडिशनका क्रममा एक किशोरीप्रति निर्णायकमण्डलकी सदस्य रचना गुरुङले गरेको व्यवहारको सामाजिक सञ्जालमा निकै आलोचना भएको थियो । ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा 'भाइरल' भएको एउटा भिडिओमा रचना गुरुङले रुखो शैलीमा ती किशोरीलाई शृङ्गार किन नगरेको, चस्माको सट्टा कन्ट्याक्ट लेन्सको प्रयोग किन नगरेको भनेर प्रश्न गरेको देखिन्छ। अहिले आएर मिस नेपाल २०१९ काे अडिसनमा सहभागी एक..
मुम्बइ, २५ चैत्र । गत वर्ष रिलिज भएको फिल्म जीरोको असफलतापछि शाहरुख खानले अत्यन्तै रोजेर मात्र फिल्म लिन थालेका छन् । अहिले आएर शाहरुखले आफ्नै सुपरहिट सिरिज डनको तेस्रो सिक्वेल ‘डन ३’ पनि छोडेको समाचार छ । अब निर्माताले यो फिल्ममा शाहरुख खानको ठाउँमा रणवीर सिंहलाई ल्याउनेबारे विचार गरिरहेको बताइएको छ । शाहरुखसँगै यो फिल्ममा अघिल्ला २ फिल्मकी हिरोइन प्रियंका चोपडा पनि..
पोखरा, २४ चैत । ‘मबिना कसै–कसैलाई मुस्किल छ पोखरामा ।’ शुक्रबार पोखरा सभागृहको स्टेजमा पछिल्लो पुस्ताका लोकप्रिय गायक प्रमोद खरेल उत्रिए । सङ्गीत पारखीहरुको बेजोड ताली र ‘हुटिङ’बाट उनको स्वागत भयो । गायक खरेलले गीतका सर्जक शीतल गिरीलाई पनि स्टेजमा बोलाए ‘शीतल पनि चिनिनु पर्छ’ भनेर चिनाए दर्शकलाई । गीतसङ्गीतमा जति धेरै आवाज र ताली सुनिन्छ, गायकलाई उतिनै ऊर्जा मिल्छ ।..
काठमाडौँ, २२ चैत । विभिन्न कार्यक्रम गरि काठमाडौँ उपत्याकामा निकै अघिदेखि मनाइदै आएको घोडेजात्रा पर्व मनाईएको छ । हरेक वर्ष चैत कृष्ण औंसीका दिन काठमाडौं उपत्यकामा घोडेजात्रा पर्व मनाउने गरिन्छ । नेपाली सेनाले घोडेजात्राका अवसरमा काठमाडौंको सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष कार्यक्रम गर्यो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना, उपप्रधानमन्त्री एंव रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेललगायतका..
आज घोडेजात्रा, उपत्यकामा बिदा, टुँडीखेलमा सैन्य कौशल प्रदर्शनी
काठमाडौं, २२ चैत्र । विशेष गरी काठमाडौँ उपत्याकामा निकै अघिदेखि मनाइदै आएको घोडेजात्रा पर्व आज मनाइँदै छ । परम्परागत घोडेजात्राका अवसरमा नेपाली सेनाले समेत आफ्ना विभिन्न कौशल प्रदर्शन गरी मनाउने प्रचलन छ । प्रत्येक वर्ष आयोजना हुने घोडेजात्राका अवसरमा नेपाली सेनाले टुँडिखेलमा अश्वकला, मोटरसाइकल खेल, शारीरिक व्यायाम, युद्धकला प्रदर्शन गर्दै आएको छ । यसपटक पनि यी विभिन्न कला कौशल प्रदर्शन गरी घोडेजात्रा..
यस्तो छ कमेडियन कपिल शर्माको कुल सम्पत्ति विवरण
काठमाडौँ, २१ चैत । कमेडियनको रुपमा कपिल शर्माको आगमनपछि भारतमा कमेडीको परिभाषा नै परिवर्तन भएको मानिने गरेको छ । ‘स्ट्याण्ड अप’ कमेडियनको रुपमा कपिल स्थापित हुनुअघि भारतमा पाकिस्तानी कमेडियनहरुको बाहुल्यता हुने गरेको थियो । फिल्ममा छोटो रोलहरु देखिने कमेडियन बाहेक भारतमा खासै स्थापित कमेडियन नै हुने गरेको थिएन । सन् २००७ मा ‘द ग्रेट इन्डियन लाफ्टर च्यालेन्ज’ प्रतियोगितामा आइ उपाधि नै जितेर भारतीय..
हाँस्य टेलिश्रृंखला ‘भद्रगोल’ को टोली ‘को बन्छ करोडपती’ को सेटमा
काठमाडौं, २० चैत । पछिल्लो समय नेपाली टेलिभिजनमा चर्चित बनिरहेको हाँस्य टेलिश्रृंखला ‘भद्रगोल’ को टोली ‘को बन्छ करोडपती’ को सेटमा पुगेका छन् । सेलिब्रेटी इपिसोड अन्तर्गतको उक्त शो आगामी साता टेलिभिजनमा हेर्न पाइने भएको छ । पछिल्लो समय नेपाली टेलिभिजनमा चर्चित बनिरहेको रियालिटी शो ‘को बन्छ करोडपती’ मा अर्को चर्चित हाँस्य टेलिश्रृंखला ‘भद्रगोल’ को टोली पुगेर रमाइलो माहोल बनाएको बताइन्छ । ‘भद्रगोल’ का..
मिस नेपालका लागि प्रतिस्पर्धीको प्रशिक्षण सुरु, ८ शहरबाट २६ छनोट
काठमाडौं २० चैत्र । हिडन ट्रेजरले आगामी मिस नेपाल प्रतियोगिताका लागि २६ प्रतिस्पर्धी छनोट गरेर प्रशिक्षण सुरु गरेको छ । हिडन ट्रेजरले क्षेत्रीय अडिसनमार्फत् ८ शहरबाट यी प्रतिस्पर्धी छनोट गरेको हो । चितवन, बिराटनगर, बिर्तामोड, भद्रपुर र दमौली प्रत्येकबाट एक प्रतिस्पर्धी छनोट गरेको छ भने पोखरा, भैरहवा, ललिलपुरबाट दुई प्रतिस्पर्धी, साथै काठमाण्डुबाट १२ प्रतिस्पर्धी छनोट गरेको छ । देशबाहिरका तीन नेपाली पनि..
गायिका नेहा कक्कर २ दिनका लागि नेपाल आउँदै, यस्तो छ समयतालिका
काठमाडौं,२० चैत । प्यारामाउन्ट इन्टरटेनमेन्टको आयोजनामा भाग लिन भारतीय गायिका नेहा कक्कर दुई दिनको लागि काठमाडौं आउने भएकी छिन् । नेहाले काठमाडौंका दुई स्थानमा आफ्नो प्रस्तुति दिनेछिन् । आउँदो चैत्र २७ गते नेहाले काठमाडौंको गैरीधारास्थित लस एस्कोबारमा प्रस्तुति दिनेछिन् । २८ गते उनलाई ठमेलको लर्ड अफ द ड्रिङ्क्समा सुन्न र देख्न सकिनेछ । ..
नायिका सम्राज्ञीले लिइन् एउटा चलचित्रको पारिश्रमिक १६ लाख
काठमाडौं १९ चैत नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले चलचित्र ‘रातो टिका निधारमा’मा अभियन गर्न १६ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक लिएकी छन् । पछिल्लो समय थोरै फिल्म खेल्ने तर, महँगो पारिश्रमिक लिने नायिकाका रूपमा उनको चर्चा भइरहेका बेला यस्तो खबर बाहिर आएको हो । अशोक शर्माले निर्देशन गर्न लागेको उक्त चलचित्रका लागि यसअघि नायिका नीता ढुंगानाको नाम फाइनल भएको थियो । अब उनी सहायक भूमिकामा देखिने..
बलिउड अभिनेता विक्की कौशलको ‘उरी’ले रच्यो इतिहास
एजेन्सी, १८ चैत बलिउडमा विक्की कौशल, मोहित रैना, यामी गौतम र परेश रावल स्टारर् फिल्म ‘उरीःद सर्जिकल स्ट्राइक’ यो वर्षको सबै भन्दा चर्चित फिल्महरु मध्ये एक हो । यो फिल्मले बलिउड बक्स अफिसमा मात्रै २४४ करो ६ लाख भारुको कमाई गरेको छ, भने ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्शको आँकडामा यो फिल्मले नयाँ रेकर्डनै बनाएको छ । अहिलेसम्मकै सबै भन्दा बढी कलेक्शन गर्ने १०..
‘बिहेको ३ महिनामै प्रियंका–निक डिभोर्सको तयारीमा’
काठमाडौं, १७ चैत । बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा र अमेरिकी पप गायक निक जोनस बिहे भएको तीन महिनामै डिभोर्स गर्ने अवस्थामा पुगेको एक अमेरिकी म्यागजिनले दावी गरेको छ । अमेरिकाको ‘ओके’ म्यागजिको रिपोर्टमा दावी गरिएअनुसार उनीहरु डिभोर्सको प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेका छन् । समाचारमा उनीहरुबीच छोटो समयमै एक अर्काप्रति वितृष्णा उत्पन्न भएको र दुवै डिभोर्स गर्ने विषयमा सहमतिमा पुगिसकेको उल्लेख छ । निक..
बलिउड अभिनेत्री अमिषालाई गम्भीर आरोप, प्रमाणित भए जेल !
मुम्बइ, १६ चैत्र । बलिउड अभिनेत्री अमिषा पटेलमाथि गम्भीर आरोप लागेको छ । अमिषाविरुद्ध राँचीको तल्लो अदालतमा साढे २ करोड ठगीको मुद्दा परेको छ । झारखण्डका निर्माता अजय कुमार सिंहले अमिषालाई अदालतमा तानेका हुन् । अमिषामाथि अढाइ करोड नतिरेको आरोप छ । अजयले अमिषालाई देसी म्याजिकको निर्माण र प्रवद्र्धनका लागि यो रकम दिएका थिए । अमिषाले अजयसँग गतवर्ष पैसा लिएकी थिइन् ।..
काठमाडौं, १५ चैत । नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने हास्यटेलिश्रृंखला ‘भद्रगोल’को आगामी श्रृंखलामा नायक प्रदीप खड्का तथा नायिका जसिता गुरुङ देखिने भएका छन् । प्रदीप र जसिताले आफ्नो चलचित्र ‘लभ स्टेशन’को प्रचारको लागि चर्चित हास्यटेलिश्रृंखला ‘भद्रगोल’लाई रोजेका हुन् । टेलिश्रृंखलामा उनीहरुको बिशेष भुमिका रहने श्रृंखला निर्देशन दीपक आचार्यले जानकारी दिए । प्रदिप र जसिता अभिनित एपिसोड चैत १५ गते शुक्रबार प्रसारण हुनेछ ।..
मलाइका अरोडा र अर्जुन कपुरको विवाह मिति तय !
मुम्बई, १४ चैत्र । केही समयदेखि मलाइका अरोडा र अर्जुन कपुरबीच विवाह हुने चर्चा चलिरहेको छ । उक्त चर्चा अब वास्तविकतामा परिणत हुने देखिएको छ । भारतीय संचारमाध्यमका अनुसार मलाइका र अर्जुन कपुरबीच हुने भनिएको विवाहको मिति तय भएको छ । भारतीय संचारमाध्यमका अनुसार मलाइका र अर्जुनबीच अप्रिल १९ मा विवाह हुने सम्भावना रहेको छ । यो जोडी १९ अप्रिलमा क्रिश्चियन रीति–रिवाज..
ललितपुर, १३ चैत कला नगरीको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आजदेखि ललितपुर महानगरपालिका–१६ मा ‘बृहत कला र सांस्कृतिक महोत्सव’ शुरु भएको छ । विश्व कला परिषद्ले केही महीना पहिले ललितपुर महानगरपालिकालाई कला नगरी घोषणा गरेको थियो । कला नगरीको प्रचार गर्नेसँगै यहाँ पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले महोत्सवको आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ । हस्तकला व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि आयोजित महोत्सव पाँच दिनसम्म सञ्चालन हुने वडा..
सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीको अवार्ड आलियाले जित्दा दीपिकाको यो हाल !
मुम्बइ, १२ चैत । फिल्मफेयर अवार्ड कार्यक्रममा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रीको अवार्ड आलिया भट्टलाई दिएपछि दीपिका पादुकोणले आफ्ना फ्यानसँग माफी मागेकी छिन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै पछिल्लो समय रिलिज भएको उनको फिल्म ‘पद्मावत’ बाट उनलाई सर्वोकृष्ट अभिनेत्रीको अवार्ड नमिलेको प्रति दुख व्यक्त गर्दै उनले माफी मागेको बताएकी छिन् । फिल्म ‘पद्मावत’ बाट दीपिकालाई सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीको अवार्ड नदिएपछि उनका फ्यानहरुले पनि सामाजिक सञ्जालमा विरोध..
फिल्मफेयर अवार्ड – २०१९ मा रणवीर र आलिया उत्कृष्ट
एजेन्सी, ११ चैत फिल्म फेयर अवार्ड– २०१९ मा रणवीर कपुरलाई फिल्म ‘सञ्जु’ का लागि सर्व श्रेष्ठ अभिनेताको पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । आलिया भट्टलाई फिल्म ‘राजी’ का लागि सर्व श्रेष्ठ अभिनेत्रीको पुरस्कार दिइयो । फिल्म राजीबाटै मेघना गुलजार सर्व श्रेष्ठ निर्देशक भए । आलियाले भनिन्, ‘विक्की तिमीबिना यो फिल्म अधुरो हुन्थ्यो ।’ उनले यसपछि करण जौहरलाई धन्यवाद दिइन् । पपुलर च्वाइसको बेस्ट..
‘नेपाल लोकस्टार’ को बजार प्रवर्धन र वितरण ‘एड-प्याड’ ले गर्ने
काठमाडौं, १० चैत्र । ए.एन.एस. को सहायक कम्पनी एड प्याडले चाहना मिडिया प्रालिले निर्माण गर्ने नेपाल लोकस्टारको प्रचार प्रसार तथा बिक्रि वितरणको जिम्मा लिएको छ । सो अवसरमा एड प्याडका तर्फबाट निर्देशक सरोज बस्नेत र चाहना मिडियाका तर्फबाट अध्यक्ष सहदेव कोइरालाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो । रियालिटी शो नेपाल लोकस्टार नेपालीहरुको आफ्नै मौलिकता झल्कने रियालिटी शो हो । यसले देशको कुना कुनामा लुकेको लोक प्रतिभालाई..
‘स्वच्छ वातावरण तथा आर्थिक समृद्धिका लागि पुष्प व्यवसाय’
काठमाडौँ, ८ चैत भृकुटीमण्डपमा शुक्रबारदेखि पुष्प मेला शुरु भएको छ । मेलाको कृषि तथा पशुपक्षी विकास राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले उद्घाटन गर्नुभयो । कृषि क्षेत्रकृषि युवाको आर्कषण बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले पुष्प व्यावसायको प्रवद्र्धन गरेर आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने बताउनुभयो । सो अवसरमा पत्रकार, पुष्प व्यवसायी, नर्सरी सञ्चालक तथा किसानलाई सम्मान गरिएको थियो । मेलामा मौसमी फूल, आलंकारीक बोट विरुवा, कट फ्लावर, ट्राइफ्लावर, सुनाखरी, कम्पोष्ट मल,..
नेपाली युवकसँग बिहे गर्दै बलिउड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर
मुम्बई, ८ चैत्र पछिल्लो समय रिलिज भएको फिल्म स्त्री सुपरहिट भएपछि श्रद्धा कपुरले दक्षिण भारतका सुपरस्टार बाहुबली फेम प्रभाससँग गरेको फिल्म साहो रिलिजको तयारीमा रहेको छ । बलिउड अभिनेत्री श्रद्धा कपुर अहिले ब्याटमिन्टन खेलाडी साइना नेह्वालको जीवनीमा आधारित फिल्म छोडेर चर्चामा रहेकी छन् । केहि समय अगाडी अभिनेता फरहान अख्तरसँग अफयेर्समा रहेकी श्रद्धा अहिले भने एक फोटो ग्राफरसँग अफ्येर्समा रहेको मिडिया रिपोर्ट सार्वजनिक..
Results 913: You are at page 15 of 31